Shiinaha warshadda wejiga maaskaro ee la tuuri karo iyo soo saarayaasha | Limeng
Qalabka ceyriinka ee maaskaro wajiga qalliinka la tuuri karo waxaa bixiya warshado soo-saar dhaqameed dhaqameed, kuwaas oo soo saara qalabka caafimaadka muddo dheer, tayadana la damaanad qaado. Iyo sidoo kale, u qalmida maaddada ee la xiriirta waxay gaarsiisan tahay heerka nidaamka maaraynta u qalmida EN14683. Gaar ahaan, maaddada dhexe waa la dhalaaliyaa 25 garaam halkii mitir oo laba jibbaaran iyo BFE (Waxtarka Fududeynta Bakteeriyada) waa 99% kor, oo ay bixiso Sinopec, oo loogu yeero dhalaalkii ugu fiicnaa ee lagu afuufo Shiinaha. Maaskarada wejiga waxay leedahay dusha sare ee jilicsan oo raaxo leh sanka la hagaajin karo iyo dhagta dhegaha ee laastikada si loogu habboonaado. Waxaa jira iska caabin neefsasho yar. Maaskarada wejiga qalliinka ayaa sidoo kale la tijaabiyaa oo la siiyaa warbixin tijaabo ah oo ka dhan ah aerosols.
Cabir 17.5cm * 9.5cm
Iska caabinta Hawada <49Pa / cm²
Waxtarka sifeynta bakteeriyada > 95% loogu talagalay walxaha hawada ku dhaca ee 0.3micron
Dhagaha Loop jiid Xoog 10N / 10s
Dayrta iyo jiilaalka ayaa ah xilli fayrasyada neefsashadu aad u firfircoon yihiin. Ha iloobin inaad maaskarkaaga ilaalisid marwalba, maxaa yeelay waxay xannibi kartaa ilaa 95% fayrasyada.
Fiiro gaar ah u yeelo waji xirista
1. Dhaq gacmaha ka hor intaadan xiro maaskaro iyo markaad ka saarto.
2. Markaad xiraneyso waji, u fiirso xagga hore iyo xagga dambe, daboolo sanka iyo afka, iskuna hagaaji galka sanka si wejiga loo waafajiyo.
3. Ka fogow taabashada maaskaro gudaha iyo dibedda gacmahaaga intaad xiran tahay. Ka saar maaskaro adoo xariga ka jaraya labada daraf.
4. Xirashada maaskarada badan si wax ku ool ah uma kordhiso saameynta ka hortagga, laakiin waxay kordhisaa caabbinta neefsashada oo waxay baabi'in kartaa cidhiidhi
5. Tallaabooyin kala duwan sida nadiifinta iyo jeermiska jeermiska wejiga maaskaro ayaan damaanad qaadi karin waxtarka wajiyadda.
6. Maaskarada caafimaad ee la tuuri karo iyo maaskarada qalliinka waxaa loo isticmaali doonaa oo keliya waqti xaddidan oo waa inaysan ka badnaan 8 saacadood wadar ahaan.Ka hor-tagga xirfadlayaasha shaqaaluhu waa inaysan isticmaalin waji ka badan 4 saacadood. Waa inaan dib loo isticmaalin.
Xiga: La tuuro laastikada dhegaha dhegaha
3 Maaskarada Wajiga
3 Maaskarada Wajiga ee Qalitaanka
Maaskarada wajiga la iska tuuro ee Earloop
Maaskarada Wajiga Caafimaadka ee La Tuuri Karo
Maaskaro Wajiga Qalliinka La Tuuri karo
Maaskarada Wejiga Qalliinka La Tuuri Karo
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka-dhalaalaya